Poetry Wave စာစဉ်အမှတ် ၂ လာပြီ (မိုးမခ) မေ ၂၄၊ ၂၀၁၈ ကဗျာဆရာတွေဖြစ်တဲ့ကေဇော်မိုးနဲ့ ရိုးခက်တို့ရဲ့ Poetry Wave Group ကစီစဉ်တဲ့ ၂ လ တကြိမ်ထုတ် Poetry Wave ဆိုတဲ့ ကဗျာရေးရာသီးသန့် စာစောင်အမှတ် ၂ ကို မေလ ၃၁ ရက်နေ့မှ ဓူဝံစာအုပ်တိုက်ကနေ တပြည်လုံးကို ထုတ်ဝေဖြန့်ချိတော့မယ်လို့ သိရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးက ကဗျာဆရာတွေအပြင် ပြည်ပရောက်ကဗျာဆရာတွေရဲ့ လက်ရာ ကဗျာပေါင်း ၂၈ ပုဒ်ပါဝင်ပြီး ခေတ်အဆက်အဆက်က စိုက်လိုက်မတ်တပ်ကဗျာရေးလာတဲ့ ဝါရင့်ကဗျာကလောင်ကြီးတွေသာမက ဒီနေ့ခေတ်ပြိုင် ကဗျာရေစီးထဲက ကြယ်ပွင့် ကဗျာဆရာလေးတွေလည်း ပါဝင်ရေးဖွဲ့ ထွန်းညှိထားတယ်လို့သိရတဲ့အတွက် ကဗျာချစ်သူတွေ အမြတ်တနိုးသိမ်းထားရမယ့် စာအုပ်တအုပ်အဖြစ် မိုးမခကသတင်းစကား ပါးလိုက်တာပါ။ ကဗျာတွေအပြင်...
အောင်ငြိမ်းချမ်း၊ ဝင်းနန္ဒာ/Myanmar Now ● ဘုန်းကြီးကျောင်း ငရဲခန်းမှာ လပေါင်းများစွာ (မိုးမခ) မေ ၂၄၊ ၂၀၁၈ ပုသိမ် — ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ငွေဆောင်ကမ်းခြေသို့သွားရာလမ်းဘေးရှိ အိမ်လေးတစ်လုံးတွင် ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးခေါင်းဆောင်များနှင့် အမျိုးသမီးတချို့ ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်ထိုင်နေကြသည်။ သားရေကွင်းကို လက်ချောင်းများတွင် ရစ်ပတ် ဆော့ကစားနေသော ဆယ်နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ဦးလည်း သူတို့နှင့်အတူ ရှိနေသည်။ အခင်းဖြစ်ပွားသည့် နေရာ (ဓာတ်ပုံများ – Myanmar Now) ဤကလေး အပါအဝင် မူလတန်းကျောင်းသူ ၄ ဦး ရွာ၏ တစ်ပါးတည်းသောဘုန်းကြီး၏ ကျောင်းတွင် လပေါင်းအတန်ကြာ သွားရောက်နေထိုင်စဉ်...
မေငြိမ်း ● မိဘနဲ့ သားသမီးဆိုတာ (မိုးမခ) မေ ၂၄၊ ၂၀၁၈ ကျမရဲ့ သားသမီးတွေ ထူးချွန်ကြတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Post တင်မယ်လို့ ကြံတိုင်း ကျမသတိရတာက မြန်မာပြည်က လူတချို့ ပြောဖူးတာကို သတိရမိလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ နိုင်ငံကြီးမှာနေပြီး အခွင့်အရေးရနေတဲ့သူတွေ အောင်မြင်တာ မဆန်း ပါဘူး။ ဒီမှာက အရာရာ ချို့တဲ့နေကြတာ…. အားကျလည်း ဘာမှမလုပ်နိုင်တာဘဲ.. ။ နိုင်ငံခြားရောက်ကလေးတွေကတော့ ကံကောင်းကြတာပေါ့…. ဆိုတဲ့ စကားတွေကိုပါ။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်နေရာဒေသမှာပဲနေနေ ပြည့်စုံတဲ့မိသားစုတွေထဲက ကလေး တွေရော ထင်တိုင်းမပေါက်တာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာနဲ့ ပညာရေးစနစ်ပေါ်မူတည်ပြီး...
ကာတွန်း လိုင်လုဏ်ရဲ့ ရှေ့သွား … နောက်လိုက် (မိုးမခ) မေ ၂၄၊ ၂၀၁၈ No tags for this post. Related posts No related posts.
ဒေါက်ထက် (ယူကေ) ● ဘိလပ်ကသူရဲ၊ မြန်မာပြည်ကသူရဲနှင့် ဘီရိုကြီး (မိုးမခ) မေ ၂၄၊ ၂၀၁၈ တလောက ဖေ့စ်ဘုတ်တခွင်တွင် အသံထွက်သော ဘီရိုကြီးတလုံးအကြောင်းကို လူအများ ပြောဆိုနေခဲ့ကြသည်။ ကာယ ကံရှင်က live တိုက်ရိုက်လွှင့်ခဲ့သည်ကို လူအများက စိတ်ဝင်တစား ရှိခဲ့ကြပါသည်။ ဒေါက်ထက်သည်လည်း သာမာန် လူသားတဦးဖြစ်သည်မို့ အတော်ပင် စိတ်တော့ဝင်စားခဲ့သည်။ သူရဲ၊...
ကာတွန်း ညီပုချေရဲ့ လေထဲပျောက်ကုန်ပါဦးမယ်ကွာ ….
ကာတွန်း ညီပုချေရဲ့ လေထဲပျောက်ကုန်ပါဦးမယ်ကွာ …. (မိုးမခ) မေ ၂၄၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ညီပုချေ Related posts ကာတွန်း ညီထွေး – ခေတ်သစ် ဝေါဟာရများ (0) ကာတွန်း ညီပုချေရဲ့ ငြိမ်းချမ်းနေသူတွေ … (0) ကာတွန်း ညီပုချေရဲ့ တွေ့ပြီပေါ့ကွာ … (0)...
ဒီလူည ● တယ်လီဗေးရှင်းရှေ့မှာ ငါထိုင်နေတယ် (မိုးမခ) မေ ၂၄၊ ၂၀၁၈ တယ်လီဗေးရှင်း ရှေ့မှာ ငါထိုင်နေတယ် မနက်အိပ်ရာက ထပြီဆိုတာနဲ့ တယ်လီဗေးရှင်းရှေ့မှာ ငါဟာ သွားထိုင်တယ် တယ်လီဗေးရှင်းက ထုတ်လွှင့်တဲ့ တရားတော်ကိုနာပြီး ငါ့စိတ်တွေဟာ အေးချမ်းလာတယ် ငါ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးစည်ပင်မှုတွေကို ကြားရတဲ့အခါ ငါဟာ ခြုံထားတဲ့စောင်ကို ခွာပြီး နိုင်ငံတော်အလံကို ခြုံလိုက်တယ်...
အောင်သဇင် ● ဖက်ဒရယ်ပြည်နယ်အခြေခံဥပဒေနဲ့ ၂၀၀၈ (မိုးမခ) မေ ၂၄၊ ၂၀၁၈ မကြာခင်ရက်ပိုင်းတုံးက ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေ ဆွဲခွင့်ရပြီ၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရတော့မယ်လို့ လုပ်စားသမား တယောက် ကြွေးကြော်တာ ကြားလိုက်ရတယ်။ ခွဲမထွက်ရေး သို့မဟုတ် ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေး စကားလုံး ထည့်မှ စစ်တပ်က သဘောတူမယ်ပြောနေတော့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရပြီလို့ သတ်မှတ်သလဲ ရယ်စရာဖြစ်နေတယ်။ အဲ့လူက HGP...
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း ဦးရွှေထူးရေးတဲ့ ၀တ္ထုစာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲ ရန်ကုန်မှာလည်း ပြုလုပ်မယ် K (မိုးမခ) မေ ၂၄၊ ၂၀၁၈ မန္တလေးမြို့နေ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း ဦးရွှေထူး (ကလောင်အမည် အောင်ဇေယျ-မန္တလေး)ရေးတဲ့ မြစ်ဧရာ နဒီရိုး မှာ မိုးချုပ်ခဲ့ပြီ အမည်ရတဲ့ ၀တ္ထုစာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကို ရန်ကုန်မြို့လမ်းမတော်သံဈေးရှိ Yangon Book Plaza မှာ မေလ ၂၇...
တင်လတ်ကို – ဟောဒီနိုင်ငံမှာ
KT# ဟောဒီနိုင်ငံမှာ တင်လတ်ကို (မိုးမခ) မေ ၂၄၊၂၀၁၈ မိတ်ကပ်တော့ လိမ်းထားပါရဲ့ နှုတ်ခမ်းနီလည်းဆိုးထားပါရဲ့ အချိုးအဆစ်တွေလည်း ရှိပါရဲ့။ ပေါင်မှာတော့ စစ်ဆိုတဲ့သေးစီးကြောင်းကြီးနဲ့ ။ ။ No tags for this post. Related posts No related posts.
နိုလှိုင်း ● ဦးထုပ်​​တွေအ​ကြောင်း (မိုးမခ) မေ ၂၃၊ ၂၀၁၈ ၁။ လူတယောက်​ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်​တခုအတွက်​ ဒါမှမဟုတ်​ ဦး​ခေါင်းတခုအတွက်​ ဦးထုပ်​တလုံးဟာ အမှန်​တကယ်​လိုအပ်​ပါသလား တဲ့။ ရုတ်​တရက်​အဲဒီ​မေးခွန်းဟာ နံရံ​ပေါ်က​နေ ကျ​နော်​ဆီခုန်​ထွက်​လာခဲ့ပါတယ်​။ ​မေးသံဟာ အဝတ်​ဗီဒို​ဘေးနံရံ​ဆီက​နေ စင်​ထွက်​လာခဲ့တာ​ပေါ့။ ပုံမှန်​အချိန်​ဆိုရင်​​တော့ တမင်​လုပ်​ယူထားတဲ့​မေးခွန်းမျိုးကို ကျ​နော်​ပြန်​​ဖြေ​လေ့မရှိပါဘူး။ ဥပမာ ​နေ​ကောင်းလား ထမင်းစားပြီးပြီလား စသည်​ဖြင့်​ ​​နေ့စဉ်​ဘဝ​တွေမှာ ကျ​နော်​တို့ဟာ...
ကာတွန်း နေညိုအေး (ဥသျှစ်ပင်) ရဲ့ ပြောင်းဖူးလေ … ပြောင်းဖူး .. (မိုးမခ) မေ ၂၃၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း နေညိုအေး (ဥသျှစ်ပင်) Related posts ကာတွန်း နေညိုအေး (ဥသျှစ်ပင်) ● ပြည်သူ့ပိုက်ဆံ ပေါ်တင် ခိုးတဲ့ကောင်တွေ (0) ကာတွန်း နေညိုအေး (ဥသျှစ်ပင်)...
ဆောင်းယွန်းလ ● ကွန်ဗီးနီးယန့်စတိုးထဲက အခိုးအငွေ့များ (မိုးမခ) မေ ၂၃၊ ၂၀၁၈ နေကောင်းရဲ့လားမေးပြီး ကောင်းသောနေ့ဖြစ်ပါစေလို့ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောနေခဲ့ရတဲ့နေ့တွေ လူအုပ်ကြီးရဲ့လက်ထဲ စီးကရက်နဲ့ မီးခြစ်တွေပါသွားတယ် ဆေးခြောက်ရနံ့က ကောင်တာမှန်နံရံမှာကပ်ကျန်ခဲ့တယ် ကလေးတွေရဲ့လက်ထဲ ချိုချဉ်သကြားလုံးနဲ့ အချိုရည်ပုလင်းတွေပါသွားတယ် အရောင်းစာရေးရဲ့လက်ထဲ အကြွေခပ်မွဲမွဲ တဆုပ်ကျန်ခဲ့တယ် စိတ်ဖိဆီးမှုသယ်ယူလာသူတချို့ က ကုန်ဈေးနှုန်းကို ဆဲရေးတိုင်းထွာမှုစကားလုံးနဲ့ တိုင်းတာကြပြီး တဂါလံ သုံးဒေါ်လာတန်...
သန့်ဇင်စိုး ● ပြန်လည်တမ်းတခြင်း (ဝတ္ထုတို) (မိုးမခ) မေ ၂၃၊ ၂၀၁၈ (၁) ဘဝမှာ ငါတော့ဖြင့် ဒါကို လုပ်လိုက်နိုင်ပါလျက်နဲ့ မလုပ်လိုက်မိလေခြင်းလို့ လူတော်တော်များများ တွေးမိဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ ငါ အထက်တန်းကျောင်းတုန်းကသာ စာကို ပိုပြီးဖိကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုရင် ခုလောက်ဆို ဒီထက် အဆင့်မြင့်တဲ့ အလုပ်မျိုး ရမှာပဲတို့၊ ငါသာ ဒီကောင်မလေးကို ငါ့ဘက်ယိုင်ပြီး အဆင်ပြေနေချိန်က...
ကာတွန်း ညီထွေးရဲ့ စီမံကိန်းတွေ …
ကာတွန်း ညီထွေးရဲ့ စီမံကိန်းတွေ … (မိုးမခ) မေ ၂၃၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ညီထွေး Related posts ကာတွန်း ညီထွေးရဲ့ စိတ်ပြေလက်ပျောက် သွားလည်ပါကွယ် … (0) ကာတွန်း ညီထွေးရဲ့ ခွင့်ပြုချက် မကျသေးပါ (0) ကာတွန်း ညီထွေး ● မြန်မာအိုင်ထော (0)...
ကိုသန်းလွင် ● ဒီမိုကရေစီပြိုလဲချိန် (မိုးမခ) မေ ၂၃၊ ၂၀၁၈ (၁) အီတလီ၊ ပိုလန်၊ ဟန်ဂေရီ ထို့ပြင် စပိန်နိုင်ငံတို့တွင် ဒီမိုကရေစီသည် ယိုယွင်းနေပါသည်။ ထို့အတူ တူရကီ၊ ဘရာဇီးနှင့် ဖိလိ ပိုင်တို့တွင်လည်း ခြိမ်းချောက်ခံနေရပါသည်။ သမ္မတထရန့်၏ အမေရိကန်သည်သာ ပဌမ ကြွေးကျော်ချက်ကြောင့် အာ ဏာရှင်ဆန်ဆန် အုပ်ချုပ်လိုကြသော အီဂျစ်၊...
စိုးနောင် (မုံရွာ) ● ထန်း (မိုးမခ) မေ ၂၃၊ ၂၀၁၈ မနှစ်က ထန်းတောကြီးဟာ ဒီနှစ် ထန်းသင်္ချိုင်းကြီးဖြစ်သွားပြီ။ ထးန်ဖို၊ ထန်းမနဲ့ ထန်းပင်ငယ်တွေရဲ့ ထန်းမိသားစုတွေဟာ သေကွဲ ရှင်ကွဲ ကွဲနေကြ။ ပိုက်ဆံဗုံးနဲ့ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရလို့ ထန်းပင်တွေဟာ အစုလိုက် အပြုံလိုက် သေဆုံးလို့။ ထန်းပင်တွေကို အိပ်မက်ထဲထိလာခြောက်လှန့်နေတာ လက်မည်းကြီးမဟုတ်ဘူး လက်ဖြူကြီး။...
မက်ခီယာဗယ်လီ၏ မင်းသား (သို့မဟုတ်) အာဏာရှင်လောင်းလျာများအတွက် မဟာဗျူဟာ ဘာသာပြန်စာအုပ် ထွက်ရှိ K (မိုးမခ) မေ ၂၃၊ ၂၀၁၈ ကျော်ထက်ထွန်း မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုတဲ့ မက်ခီယာဗယ်လီ၏ မင်းသား(သို့မဟုတ်) အာဏာရှင်လောင်းလျာများအတွက် မဟာဗျူဟာ အမည်ရတဲ့ဘာသာပြန်စာအုပ်ထွက်ရှိလာပါတယ်။ မူရင်းရေးသားသူ မက်ခီယာဗယ်လင်ရဲ့The Princeဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုထားတာဖြစ်ပြီး ယဉ်မျိုးစာပေကနေ ထုတ်ဝေထားပါတယ်။ စာအုပ်မှာ အခန်း(၂၆) ခန်းပါရှိပြီး...
ကာတွန်း ATH ရဲ့ ဟိုးရှေးရှေးတုန်းကပေါ့ကွယ် … (မိုးမခ) မေ ၂၂၊ ၂၀၁၈ No tags for this post. Related posts No related posts.
လင်းသက်ငြိမ် ● အေးစက်သောသတ္တုများ (မိုးမခ) မေ ၂၂၊ ၂၀၁၈ မနေ့က ဘာဖြစ်သွားမှန်းမသိလိုက်ဘူး ဒီနေ့လည်း ဘာဖြစ်ဦးမယ် မသိသေးဘူး မာလိန်မှူးမှောက်နေတော့ ရေစီးက သဘောင်္ကို သယ်ဆောင်တယ် ဦးတည်ရာမဲ့ မီးခိုးငွေ့လား ညကြီးထဲက ချောင်းဆိုးသံလား ပုလင်းတလုံး ကျကွဲသံဟာ အခန်းထဲကနေ အပြင်ကို တိုးထွက်သွား ဆိုလက်စတေး ဘယ်လိုဆုံးရမလဲ ရှူနေတဲ့လေကို ဘယ်လိုမှုတ်ထုတ်လိုက်သလဲ...
မောင်စွမ်းရည် ● ကဗျာဆရာ့အိမ် (မိုးမခ) မေ ၂၂၊ ၂၀၁၈ ရန်ကုန်မြို့မှာကဗျာဆရာ့အိမ်လို့ကျော်ကြားဖူးတာကတော့ ကဗျာဆရာတင်မိုးရဲ့ အိမ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အင်းစိန်မှာရှိပါတယ်။ ရေမြောင်း (ချောင်းကလေး) ဘေးက ကမ်းပါးကို သူ့အိမ်အပေါ်ထပ်နဲ့ တံတားထိုးထားတယ်။ အိမ်ပုံစံကတော့ မြန်မာမှု လို့ ဗိသုကာဆရာရွှေက ပြောပါတယ်။ အိမ်ရှင်တွေ ဝင်မရှုပ်နဲ့ဆိုပြီး သူကိုယ်တိုင် သူ့လက်သမားနဲ့သူ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုပြီး ဆောက်တာပါ။ အများကတော့...
မေ လေးပတ်မြောက် အနုပညာရပ်ဝန်းသတင်းများ K (မိုးမခ) မေ ၂၁၊ ၂၀၁၈ လူငယ်အမျိုးသမီး ဓာတ်ပုံဆရာ ၅ဦးရဲ့”Us & Beyond” အမည်ရတဲ့ ဓာတ်ပုံပြပွဲ ပြသနေ ရန်ကုန်အခြေစိုက် အမျိုးသမီးဓာတ်ပုံဆရာအဖွဲ့ “သူမ” (Thuma Collective) က ကြီးမှူးပြသတဲ့”Us & Beyond” အမည် ရတဲ့ ဓာတ်ပုံပြပွဲကို ရန်ကုန်မြို့...
မောင်အဉ္စန ● မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန် ငြိမ်းချမ်းရေး – အပိုင်း (၄)
မောင်အဉ္စန ● မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန် ငြိမ်းချမ်းရေး – အပိုင်း (၄) (မိုးမခ) မေ ၂၂၊ ၂၀၁၈ ● ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ နှင့် ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ် ဘာကွာလဲ … မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်း ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းဦးသိန်းစိန်ရဲ့ စစ်တပိုင်းအစိုးရလက်ထက် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ် စဉ်ကို ၂၀၁၁ သြဂုတ်လမှာ စတင်ဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၈...
ေ အာင်ဝေး● ချ စ် လို့ရေးတဲ့ က ဗျာ( ၈ ) (မိုးမခ) မေ ၂၁၊ ၂၀၁၈ “ပြည်တွင်းစစ် အနှစ် ခုနစ်ဆယ်၊ တော်ပြီ”...
ကာတွန်း ကိုခေတ်ရဲ့ ဆင်တွေ၊ ဆိတ်တွေ၊ ပုရွက်ဆိတ်တွေ … (မိုးမခ) မေ ၂၁၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ကိုခေတ် Related posts ကာတွန်း ကိုခေတ်ရဲ့ ပြောင်းလည်း ပြောင်းပြောင်းပါပဲ (0) ကာတွန်း ကိုခေတ်ရဲ့ အာစိတို့ကြိုက်တဲ့ကား (0) ကာတွန်း ကိုခေတ်ရဲ့ ဟိုပူရ သည်ပူရ (0)...
ဆက်ဝေမိုး – မတိုင်မီ
မတိုင်မီ ဆက်ဝေမိုး (မိုးမခ) မေ ၂၁၊ ၂၀၁၈ အတိတ်မတိုင်ခင်က အတိတ်ဟာ ဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ။ ငါ့ရင်မှာ ငြိပါလာတာ အတိတ်မဟုတ် အတိတ်မတိုင်ခင်အချိန်လေးသာ …။ ။ မေ ၁၅၊ ၂၀၁၈ No tags for this post. Related posts No related posts.
မေဇွန်အေး ● သူစိမ်းတရံဆန် သစ်သီးများ (ဝတ္ထုတို) (မိုးမခ) မေ ၂၁၊ ၂၀၁၈ သိမ့်တယောက် ငိုရဖို့ပင် ငုတ်တုတ်မေ့နေသည်။ ငိုဖို့လည်း မျက်ရည်များပင် ကျန်ပါဦးမည်လား ….။ မကြာသေးမှီက သိမ့်တယောက် အမောတကော ဆေးသွားဝယ်ခဲ့တာပဲလေ။ တရှိန်းရှိန်းဘဲ လောင်ကျွမ်းနေသည့် နေကျဲကျဲ တောက်အောက်မှာ ထီးကမပါ။ လသာနေသည့်အလား ပူမှန်းပင်မသိတော့အောင်ပဲ ဆေးဆိုင် ကြီးတဆိုင်ဆီသို့...
လင်းသစ်​နီ ● တစုံတရာ ဆိပ်​ကမ်း (မိုးမခ) မေ ၂၁၊ ၂၀၁၈ အပြုံး​တွေက အလွမ်းခုတ်​ရာ အစင်း​ကြောင်းနဲ့ ​ဈေးကြီး​ပေးဝယ်​ထားရတဲ့ လူ့ဘဝလို့ဆိုတယ်​ အနက်​​ရောင်​မျက်​နှာဖုံး​တွေ​နောက်​မှာ ​မျော​နေတဲ့ဘဝကို​တွေးမိ​တော့ ဘယ်​လိုရုပ်​​တွေများလဲ အသက်​ရှူသံ​​တွေက မျက်​နှာဖုံးကိုဆွဲဖြုတ်​လိုက်​တာနဲ့​​ ရေနစ်​​နေမလား ပြတင်း​ပေါက်​ကို ထပိတ်​မိ​တော့မယ်​ ငါးစာက မရှိဘူး ​ဂျိတ်​မှာချိတ်​မိ​နေတဲ့ မမြဲ​သောတရား​​တွေကို စိတ်​နဲ့လွှတ်​ချလိုက်​​တော့ ကျ​နော့်​ ဆိပ်​ကမ်းမှာ ငါးတကောင်​မှ...
ကာတွန်း OKKW ရဲ့ အဖျားရှူးနေတယ် …
ကာတွန်း OKKW ရဲ့ အဖျားရှူးနေတယ် … (မိုးမခ) မေ ၂၁၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း OKKW Related posts ကာတွန်း OKKW ရဲ့ ခေတ်နှစ်ခေတ် (0) ကာတွန်း OKKW ရဲ့ အဘတို့ ဆေးရုံ (0) ကာတွန်း okkw ရဲ့ တာဝန်...
မောင်မောင်စိုး ● နှင်းဆီနီနီ အိပ်မက်များ (၁၉၇၅ – ၁၉၈ဝ) – အပိုင်း (၇၄) (မိုးမခ) မေ ၂၁၊ ၂၀၁၈ ● ၇၅၁ဝ စီမံကိန်းနှင့် CPB တပ်ဖွဲ့များ CPB ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်၏ ၇၅၁ဝ စစ်ရေးစီမံကိန်းသည် အရှေ့မြောက်စစ်ဒေသ၊ ၈၁၅ စစ်ဒေသ၊ တပ်မဟာ ၇၆၈ တို့အပေါ်...
Page 1 of 89612345...896»
>Daw Suu meets UN envoy
>တက္ကသိုလ် နေ၀င်း - ဗိုလ်ခဵပ်ြအောင်ဆန်းနဲႚ ငၝးမူးတန်းရုပ်ရငြ်
Poetry Wave စာစဉ်အမှတ် ၂ လာပြီ https://t.co/ThzoS2FRu1 about3hours ago ReplyRetweetFavorite
ဒေါက်ထက် (ယူကေ) ● ဘိလပ်ကသူရဲ၊ မြန်မာပြည်ကသူရဲနှင့် ဘီရိုကြီး https://t.co/XxLiuz5EXc https://t.co/nxKjH2pvQF about 10 hours ago ReplyRetweetFavorite